Cunsuriyiinta oo dad u lah kuraastii ay ku guulaysteen | Somaliska
Xisbiga Cunsuriga ee SD ayaa waxaa la soo daristay dhabaato xaga dadka ah, ayadoo ay layihiin cidii u buuxin lahayd qaar ka mid ah kuraastii ay ka heleen kamuunada Sweden, maanta ayay ahayd markii mid ka mid ah mudanayaashoodii ku guuleytay gursiga kamuunka Gällivare ee waqooyiga Sweden uu isaga baxay xisbiga asagoo sheegay in uusan markii hore si hufan u akhrin sharciga iyo aragtida Xisbiga. "Waxaan akhriyay aragtidooda, runtiina waan bahdilay kamuunkeyga. Uma noqon karo musharax xisbigaan. Waxaan leeyahay asxaab ajanabi ah" ayuu yiri Eric Gerhardsson oo ah musharaxa iska diiday xilkii kamuunka Gällivare. Waxa uu sheegay qaabka uu ku soo galay xisbiga uu ahaa mid deg deg ah, asagoo sheegay in uusan la dhacsaneyn qaabka dowlada Sweden ay u agaasimto soo galootiga balse uusan ahayn cunsuri. "Todobo qof oo hal qol ku jira banii aadanimo ma ahan. Tiro badan oo ka mid ah soo galootiga waxay leeyihiin waxbarasho, balse haddii magacaaga yahay Maxamed shaqo ma heleysid. Sideen u xalinaa dhibaatadaan" ayuu yiri Eric Gerhardsson Balse waxa uu sheegay fikrada xisbiga SD ee ah in qaxootiga dalka laga saaro, reeraha la keenayana la joojiyo aysan sax ahayn balse loo baahan yahay in dowlada iyo Laanta Socdaalka ay wadahal ka sameeyaan sidii xal loo gaari lahaa. Xisbiga cunsuriga SD ayaa dhibaato ka haysataa buuxinta kuraastii ay ka heleen khaar badan oo ka mid ah kamuunada Sweden ayagoo hada u baahan 52 kursi in ay ka buuxiyaan kamuunada Sweden iyo 63 kursi oo kobolada ah ayadoo la filayo dad fara badan oo kalena in ay ka baxaan xisbiga. Tirada ka baxaysa xisbiga ayaa aad u korortay ayadoo 4 sano ka hor ay ka banaanaayeen 14 kursi oo keliya balse maanta ay la yihiin 54 kursi. The Local
Xisbiga Cunsuriga ee SD ayaa waxaa la soo daristay dhabaato xaga dadka ah, ayadoo ay layihiin cidii u buuxin lahayd qaar ka mid ah kuraastii ay ka heleen kamuunada Sweden, maanta ayay ahayd markii mid ka mid ah mudanayaashoodii ku guuleytay gursiga kamuunka Gällivare ee waqooyiga Sweden uu isaga baxay xisbiga asagoo sheegay in uusan markii hore si hufan u akhrin sharciga iyo aragtida Xisbiga.
“Waxaan akhriyay aragtidooda, runtiina waan bahdilay kamuunkeyga. Uma noqon karo musharax xisbigaan. Waxaan leeyahay asxaab ajanabi ah” ayuu yiri Eric Gerhardsson oo ah musharaxa iska diiday xilkii kamuunka Gällivare.
Waxa uu sheegay qaabka uu ku soo galay xisbiga uu ahaa mid deg deg ah, asagoo sheegay in uusan la dhacsaneyn qaabka dowlada Sweden ay u agaasimto soo galootiga balse uusan ahayn cunsuri.
“Todobo qof oo hal qol ku jira banii aadanimo ma ahan. Tiro badan oo ka mid ah soo galootiga waxay leeyihiin waxbarasho, balse haddii magacaaga yahay Maxamed shaqo ma heleysid. Sideen u xalinaa dhibaatadaan” ayuu yiri Eric Gerhardsson
Balse waxa uu sheegay fikrada xisbiga SD ee ah in qaxootiga dalka laga saaro, reeraha la keenayana la joojiyo aysan sax ahayn balse loo baahan yahay in dowlada iyo Laanta Socdaalka ay wadahal ka sameeyaan sidii xal loo gaari lahaa.
Xisbiga cunsuriga SD ayaa dhibaato ka haysataa buuxinta kuraastii ay ka heleen khaar badan oo ka mid ah kamuunada Sweden ayagoo hada u baahan 52 kursi in ay ka buuxiyaan kamuunada Sweden iyo 63 kursi oo kobolada ah ayadoo la filayo dad fara badan oo kalena in ay ka baxaan xisbiga.
Tirada ka baxaysa xisbiga ayaa aad u korortay ayadoo 4 sano ka hor ay ka banaanaayeen 14 kursi oo keliya balse maanta ay la yihiin 54 kursi.